Enyemaka ndị Asiria, akụkọ ihe mere eme nke ọdịbendị na-adịgide | Akụkọ Njem
Ihe atụ ndị Asiria
Mariela Carril | | Syria, Asia njem
Enwere m mmasị na akụkọ ihe mere eme na ọ bụ ezie na Egypt masịrị m, ọ masịrị m nke ukwuu banyere mmepeanya nke Middle East oge ochie, ndị Asiria n'etiti ha.
A mụrụ ma mepee nke Asiria n'etiti etiti Bronze Age na njedebe nke Iron Age, na ndagwurugwu nke osimiri Taịgris, Crescent a ma ama. Obere ụlọ ka dị ugbu a, mana rue taa ha adịgidebeghị mma ihe enyemaka ndị ga-enyere anyị aka ịmata obodo a ama ama.
1 Ndị assy
2 Akwụkwọ Asiria
3 Ihe atụ ndị Asiria
Na-agụ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nke Akwụkwọ Nsọ Ndị Asiria na-eche amụma na ha ga-esi n’agbụrụ ụmụ Noa, Assur. Ugbu a, mgbe mmadụ maara na akụkọ Noa dị ọtụtụ puku afọ karịa na enwere akụkọ ọzọ yiri ya nke na-eme ka ụfọdụ ndị Utnapishtin ... ihe gbanwere na usoro ndị ahụ n'oge gara aga bụ ihe omimi.
Ọ bụ kwuru na isi obodo Asiria fọrọ nke nta niile ịdị adị nke ndị a, obodo Assur, akpọrọ aha ya mgbe chi gbara ya gburugburu puku afọ nke atọ BC. Assur, Asiria, nke nsụgharị Akwụkwọ Nsọ mechara bụrụ nke nwere njikọ gbasara uto nke Iso Christianityzọ Kraịst na mpaghara ahụ.
Eziokwu bụ na ndị Asiria bụ ndị Semitic ndị na-asụ asụsụ Acadian na mbụ ruo mgbe e mechara nabata asụsụ Aramaic dị mfe. Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme na-ekwu okwu atọ dị ukwuu Asiria: Alaeze Ochie, Alaeze Ukwu na Ala Ochie, ọ bụ ezie na e nwere ọdịiche gbasara ọdịiche ndị a.
Ihe ha niile kwenyere bụ na eze ndu Asiriya bụ otu n’ime ala-eze kachasị ukwuu na Mesopotemia site na ogo mmepe nke gosiputara n'usoro nke Ọchịchị na mgbasawanye ndị agha. Gịnịkwa banyere nka Asiria?
Mgbe obodo mepere emepe, nka bu otu ihe na egosi mmepe ahu. N'ihe banyere nka Asiria anyị maara ya site na ihe sitere na mkpọmkpọ ebe nke obodo ochie dị iche iche na Mesopotemia.
Ndị na-amụ banyere ihe ochie achọtala ụlọ arụsị, obí eze na obodo, yabụ na amaara ya Ihe osise ndị Asiria gosipụtara mmepeanya nna nna ya, nka ndị Sumer. Nsogbu nke owuwu na mpaghara uwa a bu na ha jiri otutu adobe ebe obu na okwute na osisi bu ihe ndi ozo, ya mere ndu ha n’oge na adighi nma.
Luck is that e mewo ụfọdụ nkume ndị dị ebube nke Asiria n'ime nkume ya mere ndị ahụ banyere n'aka nke oge a. Maka ihe owuwu ha n'ozuzu ha jiri Adobe na ntọala ntọala mana a na-eji mbadamba okwute nwere ihe ndị a tụrụ atụ na eserese chọọ mma n’ime ma ọ bụ n’èzí Ha kwuru banyere alaeze ukwu ahụ na mmeri ya.
Okwute sitere na mpaghara ahụ dị mma maka mbadamba ndị a mana ọ dị njọ maka ịkpụ ihe oyiyi ya mere enwere atụ ole na ole nke nka a, mana ndị Asiria mụtara ịkpụ nkume ahụ ka ọ bụrụ mbadamba ụrọ ma ọ bụ ya mere bas-reliefs dị na limestone ma ọ bụ alabasta, nkume na-acha ọcha jupụtara na Taịgris), bụ ndị anyị kacha hụ.
Ndị kasị dị ukwuu bụ bas-reliefs na ndị nke dị na mpụga nwere isiokwu ụwa, ya bụ, o nweghị ihe gbasara ha n’okpukpe Asiria. Ha na-anọchite anya mmeri ndị agha, ihe nkiri anụ ọhịa, anụmanụ, ndụ ndị agha, wdg.
Ọ bụrụ na ị gaa London, ị ga-ahụ otu n'ime ihe enyemaka ndị Asiria kachasị mma. The British Museum nwere ọtụtụ nchịkọta nke ihe nnabata Asiria n'etiti ha ka puru iche nke ọdụm abua, nwoke na nwayi, nānwu anwu. A hụrụ ya na mkpọmkpọ ebe nke Obí Nineve ma bụrụ akụkụ nke ebe ka ukwuu. Ekwenyere na emere ya na 668 BC n'okpuru ọchịchị Assurbanipal.
N'eziokwu, Mkpọmkpọ ebe nke Nineve aghọwo ebe a na-egwupụta akụ́ Asiria nke ọma na otu ụlọ ihe ngosi nka enwere enyemaka ọzọ akpọrọ Mmụọ Nchebe nke ahụ sitere na Obí nke Assurbanipal nke Abụọ, nke Alaeze Ukwu Late, nke a kwenyere na ọ ga-achọ ụlọ nke onye nwe ụlọ ahụ mma: ekwenyere nwoke nwere nku bụ apkallu, ihe okike karịrị mmadụ nke akọwapụtara na ihe odide cuneiform, na-etinye okpu agha, ogologo uwe, afụ ọnụ, ajị agba na ogologo ntutu.
Ọ bụ ezie na ihe enyemaka ndị dị na mpụga bụ nka rụrụ arụ ihe enyemaka ndị na-edozi mgbidi dị n’ime obí eze kachasị na-anọchi anya ndụ n’ime ụlọ, dịkwuo ụtọ. N’ụlọ eze ọzọ, nke Khorsabad, dịka ọmụmaatụ, achọtala ihe karịrị puku abụọ nke bas-reliefs na ụmụ nwoke, ịnyịnya na azụ, emere n’ụzọ ka njọ, na-enweghị oke mma.
Ekwesịrị ikwu ya la echiche nke uzo adighi na nka ndi Asiria na ọnụ ọgụgụ nke ọnụ ọgụgụ ahụ nwere ike ịdị iche ebe onye na-ese ihe nwere mmasị itinye ụda olu. The British Museum nwere ọtụtụ n'ime ndị kasị mma Asiria bas-reliefs, nakwa Ienọgide na mweghara Lachish bụ ihe ọzọ ị kwesịrị ị na-ahụ.
Achọpụtara panel ahụ na Sennacherib Obí, Nineveh, n'ebe ugwu nke Iraq ugbu a, ọ bụkwa nke oge Alaeze Ukwu Ikpeazụ. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ alabasta mpempe nke 182 x 880 cm.
Ọ bụ akụkụ nke ịchọ mma nke obí Eze Senakerib onye chịrị n’agbata afọ 704 na 681 BC ma na-anọchite anya otu ndị agha Asiria si wakpo Lakish na-ebu ocheeze, ụgbọ ịnyịnya na ihe ndị ọzọ nke eze n’ime obodo ahụ.
Oge a nke akụkọ ntolite Asiria dị oke egwu dịka ọ dị N'ime narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX, ndị eze Asiria meriri Ọwara Oké Osimiri Peasia na ókèala Ijipt. Ha wuru n’oge ahụ ụlọ ndị kacha nwee ọchịchọ, dị ka obí eze a, na Nineve, ọ bụkwa site na mkpọmkpọ ebe nke obodo a ka ọtụtụ akụ ndị Bekee si abịa.
Buru n’uche na edere ihe ndị a nke Asiria na agba, ọ bụ mmadụ ole na ole lanarịrị ma kwe ka ndị ọzọ chee, kamakwa imewe eji adị ka ihe eji eme ọgbara ọhụrụ: mbido, etiti na njedebe n’elu mgbidi niile.
Ọ bụ ndị omenkà kpụrụ ha eji ihe igwe na nke ọla kọpa. Ndị na-amụ banyere ihe ndị mgbe ochie chere na nke ahụ bụ eziokwu Ejiri agba ma ọ bụ varnish ụfọdụ chebe ihe ndị dị na mpụga n'ihi na nkume dị mfe mmiri ozuzo na ifufe. Ọzọkwa, ha anọghị naanị ha na dịka ochicho mma jikọtara ya na brik na-egbuke egbuke.
A kwenyere ihe enyemaka ndị Asiria rutere elu ha n'oge ọchịchị Assurbanipal nke Abụọ, Narị afọ XNUMX BC, ma ọdịnala ahụ nọgidere na-arụ n’ụlọ eze nile n’obodo ndị a mụrụ mgbe e mesịrị.
Taa, anyị nwere ike ịnwe ekele maka ihe nketa ya na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie nke ụwa, British Museum ọkachasị, mana enwere olile anya na otu ụbọchị anyị nwere ike ịgagharị na udo na Middle East iji wee jee ije n'otu ala ahụ dịka ndị Asiria, ndị Sumer na ndị ọzọ dị mkpa n'oge ochie. Ọ ga-amagbu onwe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Syria » Ihe atụ ndị Asiria
Parla osimiri dị na Madrid
Oge ọkọchị 2016, ihe ị ga-eme na Norway